တိုက်ပွဲ (The Battle) | Local Resources Centre
တိုက်ပွဲ (The Battle)
Khaing Pwint Aung Thursday, March 21st, 2019
မြန်မာ့ဘော်တွင်း (သတ္တုတွင်း) ညီညွှတ်သော အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဘော်တွင်း/ကျားစခန်း သည် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များကို ရပ်တည်ဖြေရှင်းပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ယင်းအဖွဲ့သည် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအမြင်ဖွင့် သင်တန်းများကိုလည်း ပေးလျက်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာ့ဘော်တွင်း (သတ္တုတွင်း) ညီညွှတ်သော အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဘော်တွင်း /ကျားစခန်းသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းတည်မြဲလုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလများတွင် သတ္တုတွင်းအလုပ်သမားများအား အမြင်ဖွင့်သင်တန်းများပေးခြင်း ၊ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း ၊ သယံဇာတဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ တောင်းဆိုချက်များ တင်ပြခြင်း စသည်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Interviewing Baw Dwin Labor Union Organization
သို့ရာတွင် “ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ညှိနှိုင်းမယ်ခေါ်ရင် ဖိတ်သာဖိတ်တယ် ရောက်မလာတာမျိုးတွေရှိတယ် ၊ နောက်ပြီး တောင်းဆိုညှိနှိုင်းမှုတွေကို အပြည့်အဝလုပ်မပေးတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေလို့ဘဲ ပြောရမှာပေါ့” ဟု ဦးမောင်သောင်းမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင်မှလည်း ၎င်းတို့ရသင့်ရထိုက်သောအခွင့်အရေးများအကြောင်း သိနေစေကာမူ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုရမည့်အခါ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အချေအတင်ပြောဆိုရန်မရဲကြောင်းလည်း ဦးမောင်သောင်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုများကို သယံဇာတဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်း၍ အလုပ်သမားများ၏ အခြေအနေများကို တင်ပြနိုင်ခဲ့ရာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
စီမံကိန်း၏ ရလာဒ်အနေဖြင့် နမ္မတူ ၊ ဘော်တွင်းရှိ အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကို သိရှိလာပြီး ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့်အသိ နှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်း ၊ တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရမည်ကို သိရှိလာပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား ညှိနှိုင်းတင်ပြ တောင်းဆိုမှုကြောင့် မီးဖွားခွင့် (မီးမဖွားခင် ၃လနှင့် မီးဖွားပြီး ၃လ) ၊ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများတွင် လုံလောက်သော ဖြည့်စွက်အာဟာရထောက်ပံ့မှုပေးရန် ၊ ရှောင်တခင်ခွင့် ၊ လုပ်သက်ခွင့် စသည့် အချက် (၄) ချက် ရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ ်ထားသည့်အတိုင်း အခြေခံလစာများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
“Civic Engagementအသိပညာတွေကို ပြည်သူတွေများများရအောင် လုပ်စေချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း အစီရင်ခံစာရေးနည်းတွေ မှတ်တမ်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကို ပေးစေချင်တယ်” ဟု ဦးမောင်သောင်းမှ PEACE စီမံကိန်းသို့ အကြံပြုခဲ့ပါသည်။
Baw Dwin Labor Union is an organization which firmly stands for labor rights and training public on labor rights awareness Currently, it is implementing the project named “Safety and security for work place” funded by PEACE project. The main focus of the project is to training to mine workers, arranging coordination meeting/workshop with responsible companies and meeting with Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation.
“Some of the challenges mentioned by the Union is the lack of commitment by the companies, to even attend coordination meeting and lack of complaint and feedback mechanism” said U Maung Taung. Evenalabor with strong background knowledge of worker rights, he/she does not dare to raise his/her voice against his/her supervisors. In order to overcome this difficulty, the project team managed to meet with the Minister of Natural Resources and Environmental discussed this issue as one of the advocacy initiator.
As for the result, the mine workers of Nam Mathu got to know their rights and they are aware that they have to stand for their rights. Additionally, they understood the benefits of collaborating, negotiation and handling complaint mechanism with the supervisors.
Some of the positive outcome project intervention include, 1) maternity leave up to3months, 2) provided with nutritious food, 3) right to have causal leave and annual leave. Moreover, the management agreed to pay the labors with the minimum wage established by the government.
“It would be good if the civic engagement training can be provided to wider public and I personally think that PEACE project can provide report writing training to CSOs” said U Maung Taung.